Isimbo esitsha samaTshayina sobunewunewu se-Airbnb sokuhlala sekhaya - I-Airbnb
Isimbo esitsha samaTshayina sobunewunewu se-Airbnb sokuhlala sekhaya
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe ongu爱彼迎网红民宿
Le propathi ibekwe kwindawo ephithizelayo yorhwebo kunye nenkcubeko kumbindi wesixeko. Uthutho olululo.Zininzi iindawo ezinembonakalo entle.Kuthatha imizuzu engama-45 ngemoto ukuya eWudang Mountain Scenic Area kunye neekhilomitha ezili-15 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya njengomgca othe ngqo. Kufuphi neZiko lokuThenga laBantu, isitalato sokutya, iSithili sokuThenga seGolden Prayer, iWonder Hotel, iivenkile ezinkulu kunye neebhanki.
Le propati ifumaneka kwiZiko lezoRhwebo kunye neNkcubeko yaseLiuyan yeSixeko saseShiyan.Kukulungele ukuhamba kwaye yindawo efanelekileyo yokuhamba ngezoshishino, ukuthenga kunye nemisebenzi yezoshishino. Kukuhambo lwemizuzu eli-15 ukusuka kwisikwere esingasentla seSikhululo sikaLoliwe saseShiyan kunye ne-3.5 axioms ngemoto, kwaye kuthatha malunga nemizuzu engama-40 ukuqhuba ukuya eWudang Mountain Scenic Area, ekumgama weekhilomitha ezingama-45. Izibonelelo zangaphakathi zigqityiwe, kwaye imeko-bume inhle kwaye uyilo lwesitayile saseTshayina silula kwaye sinobunewunewu, kwaye ubuhle befashoni busondelelene kwaye buzolile.
I-Golden Praise Food Street, i-People's Shopping Centre, kunye neZiko lezeMali leSebe leDayang linokufikelelwa ngokuhamba ngeemitha ezingama-500. I-Hanjiang Riverside Park, i-Zixu Lake Scenic Area, i-Wudang Mountain Scenic Area, i-Shennongjia Scenic Area, njl.
Umbuki zindwendwe ngu- 爱彼迎网红民宿
Indlu ixhotyiswe nge-smart code lock yokungena ngaphandle koqhagamshelwano. Iphasiwedi iya kuthunyelwa ngeSMS.
Ixesha lokubhalisa xa ufika: 12:00 - 01:00